Howgalka AMISOM oo shaaciyey in ay la wareegi doonaan meel kasta ay ka bexeen ciidanka Ethopia – Radio Daljir
Luulyo 18, 2013 5:28 b 0
Baydhabo, July 18- 2013- Howgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa maanta balan qaaday in ay buuxin doonaan meel kasta oo looga baahan yahay howlo amni sugid ah, xili ay haatan meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya ka bexeen meleteriga Ethopia oo Dowladda caawin jiray.
Afhayeenka AMISOM Col. Cali Aadan Xaamud oo maanta shir jaraa?id ku qabtay xerada Xalane ee magaalada Muqdisho, ?ayaa waxaa uu sheegay in ay diyaar u yihiin in ay buuxiyaan meelaha ay faarujiyeen ciidamada Ethopia.
Col. Cali Xaamud wuxuu sheegay in howgalka AMISOM oo si rasmi ah uga wada howgeli doono gudaha Soomaaliya, wuxuu iclaamiyey in qorshaha AMISOM haatan lagu darayo deegaano dhowr ah oo ay tegi doonaan, si ay u sugaan amniga shacabka.
? Magaalada Baydhabo iyo deeganada kale ee gobolka Bay ee ay ka bexeen ciidanka Ethopia, dhamaantood waan tegi doonaa howgalka ayaa la wada gaarsiin doonaa? ayuu yiri Col. Xaamud.
Docda kale howgalka AMISOM wuxuu dhaleeceeyey weerarkii shalayto lagu qaaday kolonyo gaadiidka ciidanka AMISOM ah oo marayey bartamaha Kismaayo, halkaasi oo loo dhigay qarax khasaare dhaliyey.